I-OUKITEL C12 Pro: Uluhlu lokungena kunye notshi kunye negumbi eliphindwe kabini | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, I-Oukitel
I-OUKITEL ibisazisa iifowuni ezininzi kwezi nyanga zidlulileyo, uninzi lwazo kuluhlu lwazo lwe-K. Kule meko yi-OUKITEL C12 Pro, ifowuni efikelela kuluhlu lokungena lomenzi waseTshayina. Sijongene nesixhobo sokubheja kwinotshi kuyilo lwayo.
Oku kubhejwa kwe-OUKITEL C12 Pro kuyilo lwala maxesha, Kwaye isishiya sinemvakalelo elungileyo ngokweenkcukacha. Ibonisa inkqubela phambili enolu luhlu inalo ngaphakathi uphawu lwaseTshayina. Yintoni esinokuyilindela kulo mzekelo?
I-OUKITEL C12 Pro iya kubonisa isikrini esikhulu se-6,18-intshi ngomlinganiselo we-18: 9. Umlinganiso awutshintshwanga kule meko bubukho benotshi. Imibala esesikrinini imele ubungqongqo bayo, eyenza ukuba ibeyifowuni elungileyo ukuba kufuneka sibone iifoto okanye iividiyo. Ibhetri, enobungakanani be-3.300 mAh, iya kusinika ukuzimela okwaneleyo.
I-brand ithathe unonophelo olukhulu ekuyileni le modeli, inomzimba ocacileyo ekubumbeni nasekukhanyeni kwayo. Kukhululekile ukubamba ngesandla, kunye nokunika umbono wobuhle. Ngasemva kwesixhobo Sifumana ikhamera ephindwe kabini, i-8 + 2 MP. Kuyamangalisa ukufumana ikhamera ephindwe kabini kuluhlu lokungena.
Kwakhona, ngasemva kwale OUKITEL C12 Pro sifumana isivamvo somnwe, esebenza ngokukhawuleza okukhulu. Asinayo kuphela isivamvo somnwe weminwe, kuba ifowuni ikhethe nokwazisa ukuvulwa kobuso, kwisitayile esicocekileyo sobuso.
Ngaphandle koko, ukubheja kwe-OUKITEL C12 Pro kwiprosesa yeMediaTek MT6739 quad-core kunye nesantya se-1,5 GHz, sikhatshwa yi-2 GB ye-RAM. Ukongeza, sele iza ne-Android 8.1 Oreo njengenkqubo yokusebenza, enamava omsebenzisi olwelo kakhulu. Le modeli kulindeleke ukuba ifike kwintengiso ngoSeptemba. Yeyiphi imvakalelo ekushiyayo kule modeli yophawu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OUKITEL C12 Pro: Uluhlu olutsha lokungena ngenotshi
I-Facebook Watch ifika ngokusemthethweni eSpain